HowTo: GNOME တွင်လှပသော GTK ဆောင်ပုဒ် Arc ကိုထည့်သွင်းပါ Linux မှ
HowTo: GNOME တွင်လှပသော GTK ဆောင်ပုဒ်ကို Install လုပ်ပါ
ငါမနေ့ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည် OMGUbuntu ဟုခေါ်တွင်လှပသော GTK ဆောင်ပုဒ်အကြောင်း စက်ဝိုင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုသက်ရောက်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအရာများနှင့်ဆင်တူသောဒီဇိုင်းရှိသည် OS X ကို Yosemite.
နောက်တစ်ခုက virtual machine သုံးပြီးဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုပြမယ် ဆုံ ယုတ္တိကျသကဲ့သို့ GNOME။ သီအိုရီအရ၎င်းသည်အခြား GTK Desktop Environments နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့် ElementaryOS တွင်အလုပ်လုပ်သင့်သည်။
သင်ကြည့်လျှင် Files / Nautilus ဘေးဘားနောက်ကွယ်သို့မဟုတ်သင်ခေါ်ဆိုလိုသမျှနောက်ကွယ်မှ toolbar ၏နောက်ဘက်ရှိ calculator ခလုတ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
1 Arc installation ကို
Arc installation ကို
Antergos ၏အမှု၌, ငါတို့သည်၏ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာလျှင် arc ဖန်တီးသူလိုအပ်သောမှီခိုမှုအားလုံးကိုထည့်သွင်းထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့များစွာလုပ်စရာမလိုပါ။ Ubuntu သို့မဟုတ် Debian ကဲ့သို့သောအခြားဖြန့်ဖြူးမှုကိုအသုံးပြုပါက၎င်းတို့တွင်အောက်ပါ package များထည့်သွင်းထားရမည်။
Gnome / GTK 3.14 သို့မဟုတ် 3.16
အယ်လ်ပက်ကက် gtk2- အင်ဂျင် -pixbuf Debian / Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျကိုကြှနျုပျတို့သုံးပါက
ဖြန့်ဖြူးမှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့် Murrine အင်ဂျင် -
gtk-အင်ဂျင်-murrine (Arch Linux)
gtk2-engines-murrine (Debian, Ubuntu, မူလတန်း OS)
gtk-Murrine- အင်ဂျင် (Fedora)
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ package များကိုထည့်သွင်းရမည်။
pkg-config ကို o pkgconfig Fedora ကိုအသုံးပြုလျှင်
libgtk-3-dev Debian-based ဖြန့်ဝေမှုများသို့မဟုတ် gtk3-devel RPM distros သည်။
ဒီကို install လုပ်ပြီးရင် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး execute:
./autogen.sh --prefix = / usr sudo ကိုထည့်သွင်းပါ
ထိုအရာပါပဲ။ အားလုံးကောင်းသွားရင် gnome-tweak-tools တွေကိုသုံးပြီး GTK အခင်းအကျင်း (နှင့် GNOME SHELL အတွက်အခင်းအကျင်း) ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
စာရေးသူသည် Github ရှိသူ၏ repository ၏ Extra ဖိုင်တွဲအတွင်း၌လည်းကျွန်တော်တို့ကို Google Chrome အခင်းအကျင်းအတွက် extension တစ်ခုပေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့က scroll bar များနှင့်အတူ Unity တွင်ပြproblemsနာများရှိပါက console တွင်လုပ်ကြရအောင်။
gsettings တွင် com.canonical.desktop.interface scrollbar-mode ကိုပုံမှန်သတ်မှတ်သည်
တကယ်လို့ဒါကို uninstall လုပ်ချင်ရင် execute လုပ်ရမှာပါ။
sudo ကို uninstall လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » HowTo: GNOME တွင်လှပသော GTK ဆောင်ပုဒ်ကို Install လုပ်ပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ငါကြိုးစားမယ် ...
၎င်းသည် XFCE အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင် xfmw4 အတွက်အခင်းအကျင်းရှိသည်
သင်မည်သို့ xfce ၌ထည့်သွင်းခဲ့တာလဲ ငါ့ကို gnome ဗားရှင်းအမှားများကိုပို့ပေးသည်
ငါ Antergos XFCE 4.12 တွင်၎င်းကိုဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားသလို git ထဲမှာနေရာထည့်ပြီးပြproblemနာမရှိပါဘူး။
GTK သည် RAM သိပ်မသုံးပဲ QT ကဲ့သို့လှပသောနောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ GNOME အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းအုပ်စုတစ်စုဖြစ်သည်။
xfce ၄.၁၂ ကို border နဲ့သိပ်မကောင်းဘူး
ဤတွင်ငါ၏အ Antergos XFCE 4.12 ၌တည်၏ http://wstaw.org/m/2015/06/03/arc.png
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @Yoyo ။
အူး P ဟုသူကပြောသည်
Elav ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ အချိန်တန်တဲ့အခါ "gnome builder" ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးချင်ပါတယ်။
Raul P ကိုစာပြန်ရန်
ဖိုလ်ဒါများယခုငါထည့်သွင်းထားသော numix ဆောင်ပုဒ်နှင့်တူညီသည်၊ အလွန်ကောင်းသည်၊ အလွန်ကြော့ရှင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်ကွာခြားချက်မှာကျွန်ုပ်၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ။
၎င်းတို့သည်တူညီသောအခင်းအကျင်း (Numix) ဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် Antergos တွင်လာသည်။
retro retro theme လိုချင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးအခင်းအကျင်းတွေကကျွန်တော့်အတွက်တော့အလိုအလျောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာကျနော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါ။
ဒါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော် Fedora မှာစမ်းကြည့်ပါမယ်။
ကျွန်တော့်အပေါ်ဆုံးဘားကတော့ gnome bar ဟာအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးမီးခိုးရောင်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲသိလား။ ငါသည်လည်းအထက်ခန်းသုံးပါ။
အလွန်ကောင်းတဲ့, elav ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စကားမစပ်ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား Koding ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် .. ကောင်းတယ်😀
၎င်းကို Elementary OS Freya အတွက်သုံးမည်လား။ အမှု၌တစ်စုံတစ် ဦး ကကြိုးစားခဲ့ပါတယ်
ငါမှတ်ချက်ပေးရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်၏ fedora 22 တွင်ထည့်သွင်းထားသောအခင်းအကျင်းသည်ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Tony Gaxiola ဟုသူကပြောသည်
Toño Gaxiola ကိုစာပြန်ပါ
တောင်းပန်ပါတယ်၊ Yoyo ကိုမေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ဘလော့ဂ်ဟဟားဟားမဟုတ်ပါဘူး။
Arch Linux တွင်လည်း၎င်းကို AUR မှတပ်ဆင်နိုင်သည်။
သင်သည်ငါ၏အမှု၌ကဲ့သို့ packer ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက:
#packer -S arc-theme-git ဖြစ်သည်
သင် yaourt ကိုသုံးလျှင်:
Antergos နှင့် Manjaro တို့တွင်အတူတူပင်။
Gentoo for အတွက် overlay မှာတင်ပြီးပြီ
ငါ Ubuntu 14.04.2 ပေါ်မှာပါ။ ဒါဟာ Gnome ဗားရှင်းတရားဝင်မဟုတ်ကြောင်းငါ့ကိုပြောပြတယ်။ gnome 3.14 (သို့) 3.16 ကို install လုပ်ဖို့နောက်ထပ် quilombo တခုကိုငါ mount လုပ်ဖို့လိုသလား။
အလွန်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်, ငါကငါ့အ Fedora 22 gnome shell ကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်ရှိသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!! ငါအဲဒါကို OpenSuse မှာထည့်သွင်းလိုက်တယ်။
ငါ gnome နှင့်မြမြ icon ကိုအတူပွင့်လင်း suse နှင့်ယခုတစ်လခန့်ထည့်သွင်းထားတယ်, အမှန်တရားကအလွန်ကောင်းစွာထွက်လှည့်သောကြောင့်, ငါကမြင်လျှင်ကိုငြူစူလိမ့်မည်။
Solydxk ၌ Debian 8 ကို အခြေခံ၍ အလွန်ကောင်းသော distro ဖြစ်သည့်အပြင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအခင်းအကျင်းသည်လာသည်
Su လိယဆွာရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
autoreconf: လမ်းညွှန်ရိုက်ထည့် .'
autoreconf: Leaving directory။ ''
BSD နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော install … / usr / bin / install -c ကိုစစ်ဆေးသည်
တည်ဆောက်ပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ကောင်းသောဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း ... ဟုတ်ကဲ့
ချည် - ဘေးကင်းလုံခြုံ mkdir -p ... / bin / mkdir -p များအတွက်စစ်ဆေးနေ
gawk များအတွက်စစ်ဆေးနေ ... အဘယ်သူမျှမ
mawk ... mawk စစ်ဆေးနေသည်
စုံ $ လုပ်ပါ (လုပ်ပါ) ... ဟုတ်ကဲ့
အောင်ထောက်ခံမှုအသိုက် variable တွေကိုရှိမရှိစစ်ဆေးနေ ... ဟုတ်ကဲ့
pkg-config … / usr / bin / pkg-config ကိုစစ်ဆေးသည်
pkg-config ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အနည်းဆုံး version 0.9.0 …ဟုတ်ကဲ့
configure: အမှား: မမှန်ကန်သော GNOME ဗားရှင်း: 3.10
sudo ကို install လုပ်
make: ***“ install” target ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်စည်းကမ်းမရှိပါ။ အမြင့်
ubuntu mate 14.04 ကိုအသုံးပြုသည်။ မင်းကိုငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Elias Suarez A ကိုပြန်ပြောပါ
Pepe Barrascout Ortiz ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတဲ့ဒီဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ၎င်းကို Kubuntu တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်သလား၊ သို့မဟုတ်အလားတူဒီဇိုင်းနောက်တစ်ခုရှိမည်လားသင်သိပါသလား။
Pepe Barrascout Ortiz သို့ပြန်သွားပါ
အပေါ်ဆုံးဘားမှအပမည်သည့်အရာအားလုံးမဆို၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲရန်မည်သူမဆိုသိပါသလား။ xP
ငါ Ubuntu Gnome မှာထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကပုံသဏ္theာန်တူညီတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရတယ်။ ပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်ဖို့သာပြသပေမယ့်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲ၊
ဒံယေလ N ဟုသူကပြောသည်
ပြတင်းပေါက် 10> နှင့်တူသည်။ <= P
ဒံယေလ N ကိုတုံ့ပြန်ပါ
ဒီအခင်းအကျင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါပြanyနာမရှိဘဲထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါ system ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာသိချင်တယ်
ငါ ubuntu 16.04 ရှိသည်
DupeGuru - ပုံတူပွားထားသောဖိုင်များကိုဂရပ်ဖစ်ရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားပါ
Icedove 2.5 နှင့် Tor Browser 45.1 ပါသော Tails 6.0.3 ရရှိနိုင်သည်